Izindaba - Izinzuzo ezine zobuchwepheshe bokuphrinta i-piezoelectric inkjet
Njengoba sonke sazi, ubuchwepheshe obushisayo be-inkjet technology buye babusa imakethe enkulu yephrinta ye-inkjet iminyaka eminingi. Eqinisweni, ubuchwepheshe be-piezoelectric inkjet bubeke inguquko kubuchwepheshe be-inkjet. Isetshenziswe kumaphrinta wedeskithophu isikhathi eside. Ngokuthuthuka nokukhula kobuchwepheshe, amaphrinta ama-inkiet we-piezoelectric amafomethi amakhulu nawo aphume eminyakeni yamuva.
Njengoba igama liphakamisa, umgomo wobuchwepheshe be-inkjet bokufuthiza amagwebu ukusebenzisa ukumelana okuncane ukushisa uyinki ngokushesha, bese kukhiqizwa amabhamuza azokhishwa. Umgomo we-inkiet we-piezoelectric usebenzisa i-crystal piezoelectric ukwenza umthelela futhi ugcobe i-diaphragm elungiswe ekhanda lokuphrinta ukuze uyinki ekhanda lokuphrinta akhishwe.
Kusuka kumigomo ebalulwe ngenhla, singafingqa izinzuzo zobuchwepheshe be-piezoelectric inkjet lapho sisetshenziswa emisebenzini yokunyathelisa enefomethi enkulu:
(1) Iyahambisana nama-inki amaningi
Ukusetshenziswa kwemibhobho yamaphayiphielectric kungaba okuguquguqukayo xaxa ekukhetheni ama-inki amafomula ahlukile. Njengoba indlela yokushisa ye-foam inkjet idinga ukushisa uyinki, ukwakheka kwamakhemikhali kukayinki kufanele kufaniswe kahle negobolondo likayinki. Njengoba indlela ye-piezoelectric inkjet ayidingi ukushisa uyinki, ukukhetha kukayinki kungabanzi kakhulu.
Isimo esihle kakhulu salolu hlelo ukusetshenziswa kukayinki onombala. Inzuzo ye-inki ye-pigment ukuthi imelana kakhulu ne-UV Radiation kunodayi (i-Dye based) uyinki, futhi ingahlala isikhathi eside ngaphandle. Kungaba nalesi sici ngoba ama-molecule e-pigment ku-inki ye-pigment avame ukuhlanganiswa ngamaqembu. Ngemuva kokuthi izinhlayiya ezenziwe ngamamolekyuli e-pigment zikhanyiswe yimisebe ye-ultraviolet, noma ngabe amanye ama-molecule e-pigment abhujisiwe, kusenama-molecule e-pigment anele ukugcina umbala wokuqala.
Ngaphezu kwalokho, ama-molecule e-pigment nawo azokwakha i-crystal lattice. Ngaphansi kwemisebe ye-ultraviolet, i-crystal lattice izosakazeka futhi imunce ingxenye yamandla e-ray, ngaleyo ndlela ivikele izinhlayiya ze-pigment ekulimaleni. Lesi sici sibaluleke kakhulu.
Vele, inki ye-pigment nayo inamaphutha ayo, okusobala kakhulu ukuthi i-pigment ikhona esimweni sezinhlayiya ku-inki. Lezi zinhlayiya zizosabalalisa ukukhanya futhi zenze isithombe sibe mnyama. Yize abanye abakhiqizi bebesebenzisa ama-pigment inks kuma-printa foam inkjet phrinta esikhathini esedlule, ngenxa yesimo se-polymerization nemvula yamangqamuzana e-pigment, akunakugwenywa ukuthi imibhobho yayo izovalwa. Noma kungafuthelana, kuzobangela kuphela uyinki. Ukuhlushwa kunzima kakhulu ukukuqonda, futhi ukuvaleka kubi kakhulu. Ngemuva kweminyaka yocwaningo, kukhona nezinye izinki ezithuthukisiwe zombala zamaphrinta we-foam inkjet emakethe namuhla, kufaka phakathi ukwenziwa kwamakhemikhali okuthuthukile ukubambezela ukuhlangana kwezinhlayiya, nokugaya okungaphezulu kwe-Fine kwenza ububanzi bama-molecule e-pigment bube bncane kunobude be-wavelength yonke i-spectrum ukugwema ukusabalala okulula. Kodwa-ke, abasebenzisi babike ukuthi inkinga yokuvala isekhona, noma umbala wesithombe usakhanya.
Izinkinga ezingenhla zizoncishiswa kakhulu kubuchwepheshe be-piezoelectric inkjet, futhi umfutho odalwe ukunwetshwa kwe-crystal ungaqinisekisa ukuthi umlomo wombhobho awuvinjelwe, futhi ukuminyana kukayinki kungalawulwa ngokunembile ngoba akuthinteki ukushisa. Noma, uyinki ojiyile anganciphisa nenkinga yombala ofiphele.
(okubili) kungafakwa ngoyinki wokuqukethwe oqinile okuphezulu Imibhobho esemzimbeni ingakhetha ama-inki anokuqukethwe okuqinile okuqinile. Ngokuvamile, okuqukethwe kwamanzi kukayinki okusetshenziswa kumaphrinta we-foam inkjet adingekayo kufanele kube phakathi kuka-70% no-90% ukugcina imibhobho ivulekile futhi ibambisane nomphumela wokushisa. Kuyadingeka ukuvumela isikhathi esanele sokuthi uyinki womile kwabezindaba ngaphandle kokusabalala ngaphandle, kepha inkinga ukuthi le mfuneko ivimbela amaphrinta we-foam inkjet ashisayo ekuqhubekeni ukwandisa ijubane lokuphrinta. Ngenxa yalokhu, amaphrinta wamanje we-piezoelectric inkjet emakethe ashesha kakhulu kunamaphrinta aphuma amagwebu ashisayo.
Njengoba ukusetshenziswa kwemibhobho yamaphayiphu kagesi kungakhetha uyinki ngokuqukethwe okuphezulu okuqinile, ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwemidiya engenawo amanzi nokunye okudlekayo kuzoba lula, futhi nemidiya ekhiqizwayo nayo inokusebenza okuphezulu okungangeni manzi.
(2) Isithombe sicace bha
Ukusetshenziswa kwemibhobho yamaphayiphielectric kungalawula kangcono ukwakheka nosayizi wamachashazi oyinki, okuholela kumphumela wesithombe ocacile.
Lapho kusetshenziswa ubuchwepheshe be-inkjet obushisayo obushisayo, uyinki uwela phezu kwendawo emaphakathi ngendlela ye-splash. Uyinki we-inki ye-piezoelectric uhlanganiswe nomaphakathi ngesimo seLay. Ngokusebenzisa i-voltage ku-crystal piezoelectric nokufanisa ububanzi be-inkjet, ubukhulu nokuma kwamachashazi we-inki kungalawulwa kangcono. Ngakho-ke, esinqumweni esifanayo, ukukhishwa kwesithombe yiphrinta ye-inki ye-piezoelectric inkjet kuzocaca futhi kugqame kakhulu.
(3) Thuthukisa futhi ukhiqize izinzuzo
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-inki ye-piezoelectric kungagcina inkathazo yokushintsha amakhanda e-inki kanye ne-ink cartridges futhi kunciphise nezindleko. Kubuchwepheshe be-inki ye-piezoelectric, uyinki ngeke ufudunyezwe, kuhlanganiswe ne-thrush eyenziwe yi-piezoelectric crystal, umbhobho we-piezoelectric ungasetshenziswa unomphela ngombono.
Njengamanje, inkampani ye-Yinghe izibophezele ekukhiqizeni amaphrinta we-inkjet we-piezoelectric asheshayo futhi anembile. Njengamanje, iphrinta eyi-1.8 / 2.5 / 3.2 metres ekhiqizwe inkampani yethu yamukelwa amakhasimende amaningi asekhaya naphesheya. Umshini wethu we-piezoelectric inkjet usebenzisa i-othomathikhi Uhlelo lokumunca uyinki kanye nohlelo lokuzikrola oluzenzakalelayo luqinisekisa ukuthi imibhobho ayivalwanga futhi imibhobho ihlala isesimweni esihle. Uhlelo luhlinzeka ngamamodi wokuphrinta we-1440 wokucacisa okuphezulu nokunemba kakhulu. Abasebenzisi bangakhetha izinto ezahlukahlukene zokuphrinta. Ukusetshenziswa kohlelo lokomisa kathathu nokomisa umoya kungafinyelela khona manjalo Umsebenzi wokufafaza nowomile, izindleko zokukhiqiza eziphansi kakhulu, zikuvumela ngokushesha futhi kalula uthole imbuyiselo.